युवालाई स्वदेशमै उद्यमी बनाउने सारथिः आइडिया स्टुडियो ‘सोच र पैसाको फ्यूजन’
दिनेश गौतम काठमाडौं, ९ भदौ
भनिन्छ, ‘एकै सेकेन्डमा जिन्दगी परिवर्तन हुँदैन, तर एक सेकेन्डको सोचले सारा जिन्दगी परिवर्तन हुन सक्छ ।’ जसका लागि आवश्यक छ, आइडिया र पैसा ।
आइडिया हुनेसँग पैसा छैन, पैसा हुनेसँग आइडिया । यसर्थ आइडिया र पैसाको फ्यूजन गराएको छ, आइडिया स्टुडियोले । जसले ‘सोचदेखि उद्योगसम्म’को अवधारणा निर्माण गरी विकास गरिरहेको छ ।
लाजिम्पाटस्थित होटल टिबेटको पाँचौ तलामा प्रतीक्षारत थिए, तीन आइडिया किङ । अर्थात् आइडिया स्टुडियोका संस्थापक डा. छिरिङ्ग लामा, रुपेश श्रेष्ठ र सुरेश सिम्खडा ।
भेटपछि कफीको चुस्कीसँगै आइडिया स्टुडियोबारे भलाकुसारी सुरु भयो ।
लामा, श्रेष्ठ र सिम्खडाको भेट पाँच वर्षअघि आइडिया स्टुडियोले नै गराएको रहेछ । यो अवधिमा उनीहरुले निकै आरोह–अवरोहको सामना गर्नुपर्यो । तर उनी हरअवरोहलाई उत्प्रेरणाका रुपमा लिए । हरअनुभवले हौसला थप्दै गयो ।
‘सुरुमा हाम्रो ‘सोचदेखि उद्योगसम्म’ अभियानलाई धेरैले उडाए । नेपाल जस्तो देशमा यस्तो अभियान सफल हुँदैन भनेर धेरैले लख काटे’ अध्यक्ष छिरिङले यहाँसम्मको यात्राका क्रममा भोगेका अनुभवलाई खोलत्दै भने, ‘तर, हामीले धेरै सुझाव लिएर ‘स्वनिर्णय’ गर्दै आयौं ।’
यसरी जन्मियो ‘आइडिया स्टुडियो’
मेरो को छ ? कसले सहयोग गर्र्छ ? हाम्रो कुरा कसले सुन्छ ? पैसा कसले दिन्छ ? उद्यमी बन्ने तर कसले लगानी गरिदिन्छ ? आत्मनिर्भर र उद्यमी बन्न चाहने आमयुवाका लागि यी प्रश्न जटिल थिए ।
यसबीच युवालाई रोजगारीसँगै उद्यमी बनाउँन सहयोग गर्ने गरी एउटा अभियानको जरुरी देखे, आइडिया किङहरुले । र, ‘सोचदेखि उद्योगसम्म’को अभियानलाई डटेर सामना गर्ने प्रण गर्दै सन् २०१४ मा आइडिया स्टुडियोको जन्म भयो । लामो छलफलपछि ‘आइडिया स्टुडियो’ नाम दिइयो ।
‘उद्यमी बन्न चाहने युवाको सारथि बन्न आइडिया स्टुडियो आएको हो ।’ छिरिङ भन्छन्, ‘अहिले युवादेखि जेष्ठ नागरिकसम्म यो अभियानमा जोडिएका छन् ।’ अनि उनले सम्झिए, काठमाडौं विश्वविद्यालय, युसनसेफ र मिटिङ प्वइन्ट । जसकारण आइडिया स्टुडियो यहाँसम्म आइपुगेको छ ।
केही गर्न चाहने युवालाई ‘स्वदेशमै सम्भव छ’ भन्ने पार्नु चुनौतिपूर्ण थियो । देशप्रति आमयुवा निराश भएका बेला आएको आइडिया स्टुडियोले धेरैको मनस्थिति परिवर्तन गरिदिएको छ । सोच हुने हो भने स्वदेशमै उल्लेख्य केही गर्न सकिने पाठ सिकाएको छ, आइडिया स्टुडियोले ।
‘आफ्नो कोही नभए हामी भगवानलाई सम्झौन्छौं,’ छिरिङ भन्छन्, ‘अहिले आइडिएटरहरु आइडिया स्टुडियोलाई सम्झनुहुन्छ ।’ पैसा भन्दा ठूलो नविनतम् सोच हो, त्यसैले सोचलाई लगानीको वातवरण बनाएका छौं । नयाँ सोचको सिर्जना, मानवीयताको भावना, सामाजिक मूल्य, मान्यतामा आधारित नेपाली परिवेशअनुसारको राम्रो आइडियालाई बैंकदेखि व्यक्तिसम्मले लगानी गरेको र गर्नसक्ने बताउँछन्, छिरिङ ।
‘एउटा बच्चा जन्माउँन श्रीमान–श्रमती भएपुग्छ । तर, हुर्काउन समाज र राष्ट्र चाहिन्छ,’ संस्थापक रुपेशले थपे, ‘त्यस्तै उद्यमशीलतामा उद्यमीलाई हुर्काउन सबै चहिन्छ ।’
युवा स्वदेशमै केही गर्न चाहन्थे । तर, लगानी गरिदिने कोही थिएनन् । सिक्न खोज्थे, सिकाउने थिएनन् । व्यावसायबारे सैद्धान्तिक कुरा पढ्थे । तर, व्यवहारिक ज्ञानको अभाव थियो । जसकारण युवा, विद्यार्थी अन्योलमा थिए । तीनै अन्योलग्रस्त युवालाई व्यवहारिक सीप सिकाउन र विदेश पलायन हुनबाट रोक्न आइडिया स्टोडियोको स्थापना भएको बताउँछन्, रुपेश ।
‘पहिलो दुई सिजन त्यति राम्रो हुन सकेन । हामी पनि सिक्ने र सिकाउने चरणमा थियौं । विज्ञ समूहले उद्यमशीलताको विषयमा पढाउने काम भयो । तर त्यो व्यवहारिक हुन सकेन । पाठ्यक्रम नेपाली माटो अनुसारको भएन’ रुपेशले आइडिया स्टुडियोले गरेको संघर्षबारे भने, ‘विदेशीले अवलम्बन गरेको उद्यमशीलताको पाठ्यक्रम सुरु गर्यौं । तर सिक्ने अवसर मात्र मिल्यो । यहीँबाट सिक्दै तेस्रो सिजनमा आइपुग्दा राम्रो भयो ।’
अहिले ५० भन्दा बढी आइडिएटरले ल्याएको आइडियामा व्यवसाय सुरु भएको छ । यो उनीहरुको धैर्यताको फल हो । अहिले नेपाली परिवेश अनुसारको कोर्ष आइडिया स्टुडियोले बनाएको छ । अबको संस्करणमा झन् राम्रो हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
कहिल्यै स्कुल र विश्वविद्यालय नदेखेका पनि नामी व्यवसायी बनेका थुप्रै उदाहरण छन् । पढेर भन्दा पनि परेर धेरै ज्ञान आर्जन गर्न सकिने कुरा धेरैले स्वीकारेकै हो । यसैलाई मध्यनजर गर्दै स्थापना भएको हो, आइडिया स्टुडियो ।
‘मान्छेलाई सफल बनाउने भनेकै सोच र दृढ ईच्छाशक्तिले हो’ भन्ने कुरालाई आइडिया स्टुडियोले व्यवहारमै प्रमाणित गरिदिएको छ । त्यसैले त प्लस टु पास भएकादेखि स्कुल नै नपुगेका पनि आइडिया स्टुडियोमा जोडिएका छन् । नविनतम् सोच र सबैसँगको सहकार्यबाट सफल उद्यमी भएका छन् ।
‘नेपालमा एक सय भन्दा बढी बिजनेस कलेज छन् । कलेजबाट सैद्धान्तिक विषयमा ज्ञान पाए, उद्यमी बन्न सकेनन्’ अर्का आइडिया किङ सुरेश सिम्खडाले भने, ‘यो अभियानमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । आइडिया स्टुडियोमा ‘कलेज आइडिया हन्ट’ मार्फत् करिब एक सय कलेजका विद्यार्थीबाट पनि आइडियाको खोज गरिने छ । हाम्रो अभियानबाट एक जनाको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकियो भने पनि त्यो ठूलो उपलब्धि हो ।’
अहिले ५० भन्दा बढी आइडियाबाट सफल व्यवसाय सुरु भइसकेको छ । आइडिया किङहरु पनि नाफा भन्दा सेवाको भावबाट प्रेरित छन् । आमयुवालाई देशमै उद्यमी बनाउने सपनालाई साकार पार्न उनीहरु दिनरात नभनी लागिपरेका छन् ।
कसरी पठाउने आइडिया ?
रेडियो, टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जाल, अडियो, भिडियो र फोनबाट आइडिया पेस गर्न सकिन्छ । इन्डिभिजुअल वा ग्रुपमा आइडिया पठाउन सकिन्छ ।
नेपाली उत्पादन प्रबद्र्धन गर्ने, सामाजिक रुपान्तरणमा योगदान पुर्याउने, प्रविधि सम्बद्ध तथा हरियाली र पर्यावरण पबद्र्धन गर्ने चार बिधाका आइडियालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
जसका लागि www.ideastudio.org.np लग इन गर्नुपर्नेछ ।
कसरी छनोट हुन्छ आइडिया ?
देशभबाट आएका आइडिया ‘बैंकबाट झिकेर’ छनोट गरिन्छ । पहिलो चरणमा एक सय वटा आइडिया छनोट गरिन्छ । तीमध्येका पनि उत्कृष्ट ४० आइडियालाई छनोट गरेर एक महिना विज्ञले तालिम दिने, उद्यमी बन्न चाहिने आवश्यक प्रक्रिया सिकाउने, लगानीको वातवरण कसरी बनाउने ? कहाँबाट लगानी जुटाउने ? लगायतका विषयमा विज्ञले परामर्श र ज्ञान दिन्छन् ।
त्यसमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका एमबिबिए र बिबिएका विद्यार्थीले सहजीकरण गर्छन् । त्यसपछि ती ४० आइडियालाई टिभी सोमा प्रस्तुत गरिन्छ । तीमध्येका उत्कृष्ट आइडियालाई बैंकदेखि व्यक्तिसम्मले लगानी गर्नसक्छन् ।
आइडिया स्टुडियोको चौथो सिजन सुरु भएको छ । आइडिया स्टुडियोको यस सिजनका लागि व्यक्तिको सोचलाई उद्योगसम्म पुर्याउनका लागि आफ्नो आइडिया पठाउने मिति श्रावण १६ देखि भदौ १४ गतेसम्म राखिएको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ १०, २०७६, ०१:४८:००
फोटो पत्रकार महासंंघलाई प्रेस ज्याकेट सहयोग
१ लाख रुपैयाँ तिर्न नसक्दा कोरोना संक्रमित डाक्टर नै ‘बन्दी’, रुँदै बनाइन् भिडियो